वडाध्यक्ष अर्कैकी श्रीमतिको काखमा भेटिए पछि……. «
वडाध्यक्ष अर्कैकी श्रीमतिको काखमा भेटिए पछि…….
प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०७५, सोमबार १६:४१
बुटवल, १७ भदौ । बाग्लुङ्गका वुर्तिवाङ्ग बजारमा आज दिउँसो तिन वजेको समयमा एक जना वडाध्यक्ष अर्कैको श्रीमतिको काखमा भेटिए पछि त्यस बजारमा अहिले निकै हंगामा चलिरहेको छ । बडीगाड गाउपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष ३२ बर्षिय कृष्ण गुरुङ्ग वुर्तिबाङ्ग बजारमा डेरा गरी बसेकी मानबहादुर सुनारकी २५ बर्षिया श्रीमति संग कोठामा सगै बसेको भेटिएका हुन ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय वुर्तिवाङ्गका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ओमप्रकास संग सम्पर्क राख्दा उनले उक्त घटना घटेको पुष्ट्याँई गरे ।यादवले भने‘ उनका श्रीमान मानबहादुरले आज दिउँसो तिन बजेको समयमा उनिहरु बसेको कोठाको ढोका थुनेर हामीलाई खवर गरे पछि हामीहरुले वडाध्यक्ष र ति महिलालाई अहिले नियन्त्रणमा लिएर राखेका छौं । ’ यादवका अनुसार वडाध्यक्षले उनै महिलाले बोलाएर आफु गएको बताएका छन ।
उनले भनेका छन –‘ उनले बोलाए पछि म गएर मुढामा बसेको थिएँ, उनका श्रीमान बाहिरबाट आएर ढुका थुनेका हुन । उनका श्रीमान बिदेशमा थिए । चार पाँच महिना अघि घर आएका उनले श्रीमतिको चाल चलनबारे गोप्य रुपमा निगरानी बढाउँदै आएको स्थानियले बताए । मानबहादुरको घर निसीखोला गाउपालिका १ हर्पे हो । श्रीमान विदेश हिडे पछि दुई छोरा छोरी पढाउन भन्दै वुर्तिबाङ्गमा डेरा गरी बस्दै आएकी थिइन । आफ्नो कोठामा वडाध्यक्ष आपत्तीजनक स्थितिमा यौनजन्य क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा भेटिएको भन्दै प्रहरीमा उनका श्रीमानले उजुरी दिएको बताईएको छ । यो खबर न्युज २४ नेपालमा प्रकाशित छ